ग्यारेजमा धुन दिएको ट्याक्सी रातारात दुर्घटना भए पछि…. « Onlinetvnepal.com
ग्यारेजमा धुन दिएको ट्याक्सी रातारात दुर्घटना भए पछि….
Published :6November, 2018 6:01 pm
By : sabita Kafale
ट्याक्सी दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराको पुम्दीभुम्दीमामा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । ग्यारेजमा धुन दिइएको ट्याक्सी आज बिहान ६।३० बजे लिन जाँदा नभेटिएपछि ट्याक्सीधनीले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। ग्यारेजका मालिक समेत बेखबर रहेको सो घटनाका बारेमा ट्याक्सी दुर्घटनापछि मात्रै हराएको र ट्याक्सी दुर्घटना भएको सत्य खबर बाहिर आएको हो। आइतबार ट्याक्सी धुन भनेर ट्याक्सी चालक राजु थापाले ग्यारेजमा ट्याक्सी छोडेका थिए।
सोमबार बिहान जाँदा ट्याक्सी ग्यारेजमा थिएन । अनुसन्धानका क्रममा सोमबार राति दुर्घटना भएको ट्याक्सी नै उनको ट्याक्सी भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। दुर्घटनामा अन्दाजी २४ वर्षीय सुमन पौडेल( सुवास) को मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
मृतकको थप पहिचान खुल्न बाँकी छ । ग १ ज ५४३ नं को ट्याक्सी पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीस्थित फलेंटेको मोडमा दुर्घटना भएको हो। ट्याक्सी सडकबाट ५०० मिटर तल खसेको थियो । मृतक पौडेलको घर कास्कीको कृस्तीमा छ। उनले सिक्नका लागि राति ट्याक्सी लगेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख नवीन कार्कीले त्यसबारेमा ट्याक्सी धनी जिरो किलोमिटरका प्रेमबहादुर गुरुङमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छ।
बिहानै मुक्तिनाथको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : राम्रो कर्मफल प्राप्त
हे भगवान..कस्तो दुर्दशा ! कृष्ण वलिको जस्तै रुपाको पनि करेन्ट लागेर दुवै हात काटियो !
सामान्य परिवारमा जन्मिएकी रुपाको दुवै हात गुमेपछी रुपाकै सपना साकार पार्न रौतार परिवार बुटवल झ¥यो
ठण्डी मौसम शुरु भएको छ । यो समय ख्याल गरेन भने शरिरमा नकारात्मक असर पर्दछ
भाग्यमानीसँग हुने यी ६ कुरा: तपाईसँग छ कि छैन ? हेर्नुस
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी
भाग्यमानीसँग हुने यी ६ कुरा: तपाईसँग छ कि छैन